Vondrona iraisam-pirenena - lalàm-panorenana : Miray tendro amin’ny fiarahamonim-pirenena hamotika ny firenena -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrona iraisam-pirenena – lalàm-panorenana : Miray tendro amin’ny fiarahamonim-pirenena hamotika ny firenena
27/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Baiko mazava avy amin’ny vondrona iraisam-pirenena miaraka amin’ireo fiarahamonim-pirenena, toa ny rohy sy ny mpanao politika sasany ny handatsahana anatin’ny lalina indrindra ny firenena, ka ny hisian’ny disadisa mihaja miainga amin’ny alalan’ny lalàm-panorenana no kinendrin’ izy ireo. Samy efa hiaraha-mahita tokoa mantsy ny tsy fetezana amin’ny fomba fitantanana eto manoloana ny lalàna izay sadasada. Hatreto anefa dia fantatra mazava ny tian’ny vondrona iraisam-pirenena hatao fa dia ny hampisavorovoro an’ i Madagasikara, ary ny hisian’ny disadisa mba tsy hifankahazoana no tanjon’ izy ireo. Raha toa tokoa mantsy jerena ny fanehoan-kevitra avy amin’ ireo voalaza rehetra ireo , dia hitsobohan’i Madagasikara hanatanteraka fifidianana filoham-pirenena hatrany anatin’ny hamehana hatrany no ambetin-tenin’ izy ireo. Ka rehefa vita ny fifidianana dia mbola hisavoritaka eto indray isika mianakavy manoloana ny fisian’ io lalàm-panorenana io, ka amin’ izany fotoana izany dia tsy maintsy ireo fiarahamonim-pirenena ireo ihany no hitsangana hilaza fa tsy mety indray ilay lalàm-panorenana nefa ny disadisa sy ny fisafotofotoana tsy ahafahana mampandroso efa mandeha. Raha jerena fotsiny izao ny mikasika ny tokony hanovana ny lalàm-panorenana amin’ ny tokony hifidianana ireo lehiben’ny fokontany, dia tsy tian’ ny vondrona iraisam-pirenena homena lanja mihitsy izany toerana izany, satria amin’ izay fotoana izay dia hanana ny tanjany ireo lehiben’ny fokotany, ka tsy ho mora voarebirebin’izy ireo amin’ ny hafetsena .
Mifanjohy amin’ ny fanehoan-kevitrin’ny jeneraly misotro ronono, Ramakavelo Désire rahateo ny zava-misy ankehitriny amin’ny efa fanakorontanana misy amin’ ny alalan’ny fametrahana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, nambarany mantsy fa « amin’ny maha ahy sy tompon’andraikitra ambony teo anivon’ny tafika, dia izao mino hoe tsy fitaovam-piadian’ny mpitandro ny filaminana intsony no miparitaka ankehitriny ireo, satria ny azy ireo aza tsy ho ampy maika fa hamoaka indray. Ireo rahateo aza vao mamoaka basy, na manary basy dia efa fantatra’’ hoy ihany ny jeneraly. Miaro fanontaniana mipetraka rahateo io fanazavana izay noentin’ny jeneraly Ramakavelo Désire io , satria tokoa raha tsy basy avy eto an-toerana dia aiza no hahitan’ ireo dahalo basy “tsara lavitra noho ny an’ny mpitandro ny filaminana ny basy ampiasain’ireo dahalo amin’izao fotoana izao, ka anisan’ny azo ilazana tokoa izany hoe tsy an’ny mpitandro ny filaminana avy eto an-toerana ireo basy ireo. Ho ahy, amin’ny hevitro manokana manoloana io basy miparitaka io, dia misy ny firenena mamatsy izany eto Madagasikara mba hifamonoantsika. Ary ny tena tanjon’ ireo firenena avy any ivelany amin’ izany dia ny hamotika ny firenena malagasy eo amin’ny lafin’ny sosialy sy ara-ekonomika”hoy izy. Noho izany ireo disadisa misy ankehitriny dia tsy tonga ho azy fa iniana ho volena raha toa mikasika hanatsara sy hahaleo tena isika . Anisan’ny nitondrany fanehoan-kevitra ihany koa ny mikasika ireo andian-dahalo izay manafika ankehitriny “taiza teto amin’ny firenena no nisy hoe dahalo mandeha andiany roanjato izany hanao fanafihana. Porofo izany fa misy ny mamatsy fitaovana , ary misy ireo izay minia manakorontana”. Noho izany dia teny ampahendrena mba hieritreretan’ ny Malagasy rehetra no nambaran’ny jeneraly Désire Ramakavelo “ tsy tongatonga ho azy izao rehetra izao , fa tian’ny vahiny aza isika hiady sy hikorontana eto , satria ny harentsika no tian’ izy ireo alaina ka noho izany dia tokony hieritreritra ny rehetra” hoy izy. Mazava tokoa ny fomba fiasan’ ireo fiarahamonim-pirenena satria dia miankina tanteraka amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany miainga amin’ny tetikasa hananany no ahafahan’izy ireo miaina .